Faucets an-dakozia miaraka amina fantsom-panafody, 304 Stainless Steel ambony arc tokana tantanana boribory nikela famaohana an-dakozia miaraka amina takelaka
Home / Fitaovana an-dakozia / Misintona Faucets ao an-dakozia / Faucets ao an-dakozia miaraka amina famafazana Sprayer, 304 vy tsy misy fangarony vy mitana tariby boribory vita amin'ny nikela an-dakozia miaraka amina takelaka
naoty 5.00 avy tany 5 mifototra amin'ny 4 mpanjifa naoty
(4 mpanjifa famerenana)
304 Faucet an-dakozia tsy misy fangarony
Vita amin'ny vy tsy misy fatra SUS, fantsom-pisakafoanana an-dakozia maoderina dia safidy mety indrindra hanavaozana ny lakozia.
Fomba maody 2 – Rano / Famafazana
Maody maimbo matanjaka amin'ny fanadiovana sy ny mode tsy miova ho an'ny famenoana vilany, izay mahomby kokoa amin'ny fandrahoana sakafo.
Vokatra tena tsara
Ny cartridge ceramic dia efa nandalo fitsapana 500,000 mba hiantohana ny fiarovana ny rano sy ny androm-piainana lava.
AORAO NY FIAINANAO MPIANATRA - Mivezivezy 360 ° ny fantsona fantsona an-dakozia an-dakozia avo indrindra izay manana fantsom-pivelomana 1.5 m PX, izay manitatra ny faritra fanasana ary mahomby kokoa ny fandrahoana sakafo. Ny faucet an-dakozia tokana mitambatra dia mora kokoa manitsy ny fikorianan'ny rano sy ny mari-pana.
Mikarakara ny fahasalamanao - Mirehareha amin'ny vatana vy tsy misy fangarony 304, ity faucet an-dakozia ity dia misahana ny tontolo iainana izay miantoka ny fiarovana ny rano ary mametraka ny fahasalamanao ho lohalaharana. Manohitra ny harafesina, ny dian-tànana, ny harafesina ary mora diovina amin'ny lamba ny endrik'ilay Nickel brushing, noho ny fijery madio sy kanto.
MODY LOHATENY 2 LOHATENY - Miato / mikoriana. Fomba fitobiana maharitra hamenoana rano, tsifotra mahery ho an'ny fanadiovana sy fanasan-damba mafy. Ny aerator ABS namboarina dia manome fikorianan'ny rano milamina sady mitsitsy rano hatramin'ny 50%.
FIVAVAHANA MANGANGANA –Ny faucet an-dakozia ara-barotra dia miaraka amin'ny torolàlana momba ny fametrahana amin'ny antsipiriany ary manampy anao hametraka irery ao anatin'ny 20 minitra nefa tsy misy mpantsaka. Izahay koa dia manome takelaka fanaovana vovoka 8-metatra (mety hilentika amin'ny lavaka 1 na 3).
FAHAMARINANA 5 taona - Fonosana tsara miaraka amin'ny boaty sy spaonjy matevina. Eto amin'ny WOWOW dia mirehareha amin'ny kalitaon'ny faucets ao an-dakozia izahay ka izany no antony mora ny fametrahana azy, vita amin'ny akora avo lenta ny ampahany, ary ny kaomandy rehetra dia misy politika fiverenana 90 andro.
SKU: EVE-0071-1 Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Misintona Faucets ao an-dakozia Tags: faucet an-dakozia miaraka amina spray spray, Fitaovana savoka an-dakozia, fantsona tokana fatana tokana, faucet an-dakozia vy tsy misy fangarony
38 × 20.5 × 8 cm
Izy io dia fantsom-palatra ao an-dakozia misy fantsom-bokotra sy lovia tokana. Vokatra tsara misy vidiny mirary. Ny faucet mora indrindra napetrako!
*** B E2021 / 03 / 01
Mendrika ny vola! Ny vokatra maoderina dia miaraka amin'ny fametrahana tsotra sy torolàlana tsotra. Ahitana ny kojakoja ilaina rehetra ary azo amboarina mora foana. Ny faucet an-dakozia izay misintona dia toa tsara sy kanto tokoa, ary misy safidy roa azo esorina. Ny bokotra 2 amin'ny bokotra famafazana dia afaka miova mora foana eo anelanelan'izy ireo. Tanana mafana sy mangatsiaka tokana dia afaka mihetsika ankavia sy havanana malalaka. Ny fahatsapana voadilo ankapobeny dia malefaka ary mora mamafa madio. Ny fahitako manokana an'ity vokatra ity dia vokatra tsara misy sanda sy hatsarana.
J *** f2021 / 04 / 17
Mora apetraka ary miasa araka ny tokony ho izy. Ny endriny dia mitovy amin'ny sary. Raha ampitahaina amin'ny marika hafa, mora kokoa ity vokatra ity ary mahasoa kokoa.
H *** ny2021-04-25
Mifanentana tsara ao an-dakozia.
WOWOW iray-mitantana Pull-out Sprayer Kitchen Fa ...
TENY FAMPIAMPIANA RAKOTRA FARANY FAMPIAM-PIVAROTANA FAMPIASANA FOTSY